Nahazo fandrahonana tamin'ny fampihorohoroana ny governemanta Mosko, nitaky ny hamaranana ny fameperana COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Nahazo fandrahonana tamin'ny fampihorohoroana ny governemanta Mosko, nitaky ny hamaranana ny fameperana COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Eo am-pikarohana olona ahiahiana tsy fantatra na ahiahiana ny polisy ao Moskoa izay nandrahona ny hanapoaka ny tranon'ny governemanta foibe ao Moskoa.
Taratasy fampitahorana iray no hita tao amin'ny boaty ofisialin'ny governemanta ao Moskoa tamin'ny zoma.
Nisy taratasy tsy fantatra anarana miaraka amin'ny fandrahonana hipoahana iray nalefa tamin'ny mailaky ny governemanta Moskoa.
Nanjary tanàna voalohany manerantany i Moskoa tamin'ity herinandro ity izay nitaky vaksiny ho an'ireo miasa amin'ny sehatry ny serivisy ho an'ny daholobe.
Ny tompon'andraikitra misahana ny lalàna eto an-drenivohitra Rosiana dia mitady olona tsy fantatra na olona ahiahiana ho nandrahona Moscow tranoben'ny governemanta foibe raha toa ka tsy nesorin'ny governemanta Moskoa avy hatrany ny fameperana ny tanàna COVID-19, toy ny sarontava tsy maintsy atao eny amin'ny toerana be olona sy ny fanaovana vaksiny tsy maintsy ataon'ny mpiasa.
Araka ny fantsom-pahitalavitra Rosiana Telegram Baza, nisy taratasy fampitahorana hita tao amin'ny boaty ofisialin'ny governemanta ao Moskoa tamin'ny zoma. Nolazaina fa nanaratsy lalàna vaovao mitaky ireo izay miasa amin'ny indostria toy ny fandraisam-bahiny, ny fitaterana sy ny antsinjarany hatao vaksiny, ary koa ny fepetra takiana amin'ny Muscovites mba hisaron-tava sy fonon-tànana amin'ny metro sy amin'ny toerana malalaka ho an'ny daholobe.
Loharanom-baovao mpampihatra lalàna tsy fantatra anarana no nanamafy fa voaray ny hafatra. "Nisy taratasy tsy fantatra anarana miaraka amin'ny fandrahonana hipoaka iray nalefa tamin'ny mailaky ny governemanta Moskoa," hoy ny tompon'andraikitra.
Takatry ny polisy ankehitriny fa mitady izay tompon'antoka tamin'io fampitahorana io.
Nanjary tanàna voalohany manerantany i Moskoa tamin'ity herinandro ity izay nitaky vaksiny ho an'ireo miasa amin'ny sehatry ny serivisy ho an'ny daholobe. Ireo orinasa izay iharan'ny fepetra dia tsy maintsy miantoka fa ny 60% amin'ireo mpiasan'izy ireo dia voatsindrona vaksiny, na raha tsy izany dia miatrika sazy goavambe izy ireo. Nanambara ihany koa ny tompon'andraikitra fa afaka miato ny orinasa nefa tsy mandoa mpiasa mandà ny jab, mba hamenoana ny quota azony.
Ny renivohitra rosiana dia nahita ny isan'ny tranga voamarina fa nahatratra ny avo indrindra tao anatin'ny 24 ora farany, ary 9,056 11 no fitsapana tsara voarakitra ny alakamisy. Nampahafantarina ny fepetra momba ny tsy fahazoana mivezivezy, mandrara ny toeram-piainan'ny tanàna tsy hiditra amin'ny XNUMX ora alina. "Manakaiky kokoa ny fanapahan-kevitra henjana kokoa izahay - vetivety, nefa mafy - fameperana," hoy ny Ben'ny tanànan'i Moskoa nandritra ny fivorian'ny governemanta ny alakamisy teo.